Saddam Xuseen oo La Daldaley
Wararka ka imanaya dalka Ciraaq ayaa tibaaxay in saakay oo ah Sabti, maalin Ciidul-Adxa, waaberigii 6:00am, xilliga Ciraaq, ayaa lagu diley deldelaad madaxweynihii hore ee dalka Ciraaq, Saddaam Xuseen.
Saddaam Xuseen waxaa la qorsheynayey in lala daldalo walaalkiis Barzan Ibrahim iyo Awad Hamed al-Bandar oo ahaa qareen ka tirsanaa xukuumadii Saddaam, waxaase wararku sheegeen in la daldalayo ciida ka dib.
[Wararkii u dambeeyey ka daawo AljazeeraTV-LIVE]
TAARIIKH KOOBAN EE SADDAM XUSEEN: 1937-2006
1956-ayuu ku biiray xisbiga Ba�ath
Oct-14-1964-ayaa la xiray waqtigaa oo ay socdeen olole lagaga soo horjeeday xisbigii Ba�ath.
1966-ayaa asaga oo xabsiga ku jira loo magacaabay ku xigeenka xoghaya guud ee xisbiga Ba�ath.
1968-asaga oo xubin firfircoon ka ahaa afgambigii waqtigaa waxaa uu mas�uul ka noqday nabadgelyada gudaha wadanka, isla sanadkaana waxaa uu dhameeyay kuliyada sharciga.
March 19, 2003: Ayaa Maraykanku weerary Ciraaq
July 22, 2003: Ayaa la diley labadiisii wiil ee Uday iyo Qusay
December 13, 2003: Ayaa Maraykanku qabteen Saddaam Xuseen
July 1, 2004: Ayaa Maxkamad la soo taagey Saddaam Xuseen. October 19, 2006, waxaa sii socotey maxkamadii oo lagu eedeeyey xasuuq 1982 oo ay ka mid ahaayeen 148 qof ee tuulada Dujail, Ciraq.
November 5, 2006: Ayaa lagu helay dembigii lagu soo oogey, waxaana lagu xukumay in lagu dilo deldelaad
December 30, 2006: Sabti, maalin Ciid Al-Adxa ayaa lagu diley la daldaley Saddaam Xuseen.
Sadam waxaa uu 1958-guursaday Sajida khayrallah waxayna u dhashay shan caruur ah oo kala ah laba wiil (Uday iyo Qusay) iyo sadex gabdhood. Gabar uu dhalay Saddam ayaa waxay Ciraaq weydiisatey in aabeheed meydkiisa la siiyo qoyskiisa si loogu aaso dalka Yemen, laakiin waxaa wararku sheegeen in codsigaas laga diidey oo lagu aasayo qabri aan la garanayn oo ku yaal Ciraaq.
Akhri:: TAARIIKHDA CIRAAQ:::
Isha: Qaar qoralka ka mid ah:Cabdiraxmaan Ismaaciil shire (Darbane)
Faafin: SomaliTalk.com | Dec 30, 2006
C/Lahi Yuusuf oo Kasoo Degey Afgooye
Madaxweynaha DFKMG oo soo garey Afgooye kuna sii jeeda Villa Soomaaliya ee Muqdisho iyo sidii looga ciidey magaalada Qardho... Akhri... Dec 30
Muqdisho: Banaan baxyo Rabshado wata oo Lagu diidan yahay ciidamada Tigreega
. Video: Taayiro lagu gubey waddooyinka Muqdisho...
. Maxaakiimta: Dagaalka looga hojeedo ITO waa sii wadeynaa
. Madfac Lala Beegsaday Dekedda Muqdisho...
. Maxamed Qanyare oo dib ugu laabtay xaruntiisii Dayniile..
Warka oo dhan ka akhri halkan.....